ဘေဂျင်း သည် ဆောင်းရာသီ အိုလံပစ် အား ဒစ်ဂျစ်တယ် ယွမ် အတွက် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ပစ်လွှတ် သည့်နေရာ အဖြစ်အသုံးပြု လိမ့်မည် - Pandaily
Categories: News ကိုPeter Catterall ဇန်နဝါရီ 8, 2022 ဇန်နဝါရီ 10, 2022 မှာ Posted
ဖေဖော်ဝါရီ ၄ ရက်တွင် ပေကျင်း ၌ ၂၀ ၂၂ ဆောင်းရာသီ အိုလံပစ် ဖွင့်ပွဲ နီးကပ် လာသည်နှင့်အမျှ တရုတ် ၏အမြင့်ဆုံး ငွေကြေး အာဏာပိုင် အဖွဲ့သည် ယနေ့အထိ အထင်ရှားဆုံး စမ်းသပ်မှု ကိုပြုလုပ် ရန်ပြင်ဆင် နေသည်ကိန်းဂဏန်း များနိုင်ငံ၏ ငွေကြေး ၏တရားဝင် အီလက်ထရောနစ် ပုံစံသည် Covid ဆန့်ကျင်ရေး ပူဖောင်း ဖြစ်သည်။
Digital RMB Pilot Program သည် တရုတ်ပြည်သူ့ ဘဏ် (PBOC) ၏အဓိက ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ကိုကိုယ်စားပြု လိမ့်မည်။ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း ရှိ နိုင်ငံ များသည် ၎င်းတို့၏ ကိုယ်ပိုင် ဗဟိုဘဏ် ဒစ်ဂျစ်တယ် ငွေကြေး (CBDC) တည်ထောင်ရန် နည်းလမ်းများ ကိုရှာဖွေ နေကြသည်။
“ တရုတ်ပြည်သူ့ ဘဏ် ဟာ အိုလံပစ် ပွဲတော် ကာလမှာ အီလက်ထရောနစ် ယွမ် ငွေ မိတ်ဆက် ဖို့ စီစဉ် ခဲ့တာ ကြာ ပါပြီ” လို့ ရှန်ဟိုင်း အခြေစိုက် လေ့လာဆန်းစစ် သူနဲ့ Financial Times စာအုပ် ရေးသား သူ ရစ် ချ် တူ ရင် က ပြောပါ တယ်Cashless-တရုတ်၏ ဒစ်ဂျစ်တယ် ငွေကြေး တော်လှန်ရေး။ “ တရုတ် ဟာ CBDC ကိုစတင် တဲ့ ပထမဆုံး စက်မှု ထွန်းကား တဲ့ နိုင်ငံ ဖြစ် တယ်ဆိုတာကို ကြည့်ရင် တရုတ်ပြည်သူ့ ဘဏ် က ကမ္ဘာ ကြီးရဲ့ မျက်လုံး တွေက အာရုံစိုက် နေ တယ်ဆိုတာ နားလည် တယ်။ ဒါကြောင့် မြန်မြန်ဆန်ဆန် နဲ့ အမြန်ဆုံး လုပ် ရမယ် ဆိုတာကို လည်း နားလည် တယ်။”
CBDC သည် ငွေသား ၏ ဒစ်ဂျစ်တယ် ပုံစံ ဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့သည် နိုင်ငံ၏ ဗဟိုဘဏ် နှင့်တိုက်ရိုက် ချိတ်ဆက် ထားပြီး အီလက်ထရောနစ် ငွေပေးချေ မှုများပြုလုပ် သည့်အခါ စားသုံး သူများအနေဖြင့် ဘဏ် များကဲ့သို့သော တတိယ ပါတီ ဘဏ္ institutions ာရေး အဖွဲ့အစည်း များကို ကျော်လွှား ရန်ခွင့်ပြုသည်။ ဤ အစီအမံ များ ကိုအကောင်အထည်ဖော်ရန် လှုံ့ဆော် မှုများတွင် ငွေကြေး ဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း များ ကိုရိုးရှင်း အောင်ပြုလုပ် ခြင်းနှင့် နိုင်ငံ ၏စီးပွားရေး စနစ်တွင် ဘဏ္ inclusion ာရေးဆိုင်ရာ ပါ ၀ င်မှု တိုးချဲ့ ခြင်းတို့ပါဝင်သည်။
သူတို့ ကအစ အချို့သော အလားအလာ အန္တရာယ် များကို သယ် ဆောင်။ အရ သိရသည်သုေတသန၂၀၂၁ ခုနှစ်နို ၀ င်ဘာလတွင် ထုတ်ဝေသော အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အခြေချ ရေး ဘဏ် (Bank for International Settlements) ၏ စာတမ်း တွင် “ CBDC ကို ဒစ်ဂျစ်တယ် စီးပွားရေးနှင့် ဒေတာ ဗဟို အချက်အချာ ကျသော အခြေအနေတွင် ထည့်သွင်းစဉ်းစား သင့်သည်။ ၎င်းသည် ယှဉ် ပြို င်မှု၊ ငွေပေးချေမှု စနစ်၏ သမာဓိ နှင့် သီးသန့် တည်ရှိ မှု တို့အတွက် စိုးရိမ် မှုများ ဖြစ်ပေါ်စေသည်။”
အခုထိ ပဲကိုး နိုင်ငံနိုင်ဂျီးရီးယား နှင့် ကာရစ်ဘီယံ နိုင်ငံ ရှစ် ခုအပါအ ၀ င် အမျိုးသား ငွေကြေး ၏ ဒစ်ဂျစ်တယ် ဗားရှင်း များ ကိုအပြည့်အဝ ရရှိနိုင်ပါသည်။
လာမည့် အိုလံပစ် အားကစားပြိုင်ပွဲ သည် ဘေဂျင်း အား ငွေကြေး ဆိုင်ရာ ဒစ်ဂျစ်တယ် စနစ် တိုးတက်မှု ကိုပြသ ရန် အဖိုးတန် အခွင့်အလမ်း တစ်ခု ပေးလိမ့်မည်။ အစီရင်ခံစာ များအရ ဘေဂျင်း သို့လာရောက် သည့် နိုင်ငံခြား ခရီးသွား tour ည့်သည် များသည် အိုလံပစ် ပူဖောင်း တွင် နေ့စဉ် ဘ ၀ တွင် ပြည်မကြီး ရှိ ဘဏ် တစ်ခုတွင် အကောင့် တစ်ခု မှတ်ပုံ တင်ထား ခြင်းမရှိဘဲ ကုန်သွယ် မှုအတွက် တရုတ် CBDC သို့ ၀ င်ရောက် နိုင်သည်။
ပြည်တွင်း နည်းပညာ ကုမ္ပဏီ ကြီးများ (အဓိကအားဖြင့် Alibaba ‘s Alipay နှင့် Tencent‘ s WeChat) မှပေးသော ဘဏ္ services ာရေး ၀ န်ဆောင်မှုများကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသုံးပြု ခြင်းကြောင့် ဒစ်ဂျစ်တယ် ငွေပေးချေ မှုသည် တရုတ်နိုင်ငံတွင် အသစ်အဆန်း မဟုတ်ပါ။
“ သံုးစြဲ သူေတြ ဒီ ဂ်စ္ တယ္ ယြမ္ ေငြ ထဲ ထည့္ ႏိုင္ဖို႔ ဆိုရင္ တရုတ္ ျပည္သူ႔ ဘဏ္က သံုးစြဲ သူ အေတြ႔အႀကံဳ နဲ႔ ညီမွ် တဲ့ ဒါမွမဟုတ္ ပို ေကာင္းတဲ့ အေတြ႔အႀကံဳ ေတြကို ေပး ရမွာျဖစ္ၿပီး ေငြေပးေခ် မႈ ပလက္ ေဖာင္း ေတြျဖစ္တဲ့ Alipay နဲ႔ WeChat Payment တို႔ဟာ တရုတ္ ႏိုင္ငံမွာ ေနရာ တိုင္းမွာ ရွိပါတယ္” ဒါေၾကာင့္ မို႔လို႔ ဗဟိုဘဏ္က သူတို႔ကို ဆန္႔က်င္ တာထက္ ေငြေပးေခ် မႈ ပလက္ ေဖာင္း ေတြနဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ ခ်င္ တယ္လို႔ အၿမဲတမ္း ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ေျပာထား ပါတယ္ “ လို႔
Digital Renminbi ကတော့ စမ်းသပ် ဆဲ အဆင့် ပဲ ရှိ ပါသေးတယ်။ တရားဝင္ဒေတာလက်ရှိ CBDC ပိုက် ဆံအိတ် ၏စုစုပေါင်း ငွေပေးငွေယူ တန်ဖိုး သည်ယွမ် ၆၂ ဘီလီယံ (အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၉. ၇ ဘီလီယံ) ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ၂၀၂၀ ခုနှစ်တွင် China Mobile Payment Market ၏စုစုပေါင်း ယွမ် ၅၂ ထရီလီယံ ၏ ၁% အောက်တွင်ရှိသည်။
သို့သော် မကြာသေးမီက ဖြစ်ပေါ် တိုးတက်မှု များက စကေး သည် မကြာမီ သိသိသာသာ တိုးလာ နိုင်သည်ဟု ဖော်ပြသည်။
ဒီ အပတ္ အေစာပိုင္းက ရွန္ က်န္း အေျခစိုက္ Tencentေၾကျငာ ခ်က္WeChat တွင် ဒစ်ဂျစ်တယ် ငွေပေးချေ မှုစနစ် ကိုတိုက်ရိုက် ထောက်ပံ့ ရန်စီစဉ် ထားပြီး WeChat သည် လစဉ် တက်ကြွသော အသုံးပြုသူ ၁. ၂ ဘီလီယံကျော် အတွက် ဆက်သွယ်ရေးနှင့် လူနေ မှုပုံစံ စတဲ့ ၀ န်ဆောင်မှုများ ပေးခဲ့သည်။ ဒီ အပတ္ ထဲ မႀာလည္း သက္ေသ ဴဖစ္တဲ့App အသစ်Android နှင့် iOS အပါအ ၀ င် ထိပ်တန်း မိုဘိုင်း ပလက်ဖောင်း များတွင် လူတစ် ဦး ချင်းစီ သည် ကိုယ်ပိုင် ပိုက် ဆံအိတ် များကို ဖွင့ ်၍ ဒစ်ဂျစ်တယ် ယွမ် ဖြင့် ငွေပေးချေ နိုင်သည်။
အနာဂတ် ကို မျှော်ကြည့် ခြင်းအားဖြင့် တရုတ်နိုင်ငံ၏ CBDC အတွက်အဓိက စမ်းသပ်မှု တစ်ခုမှာ ဗဟို စနစ်သည် ပြည်တွင်း ထိပ်တန်း နည်းပညာ ကုမ္ပဏီ များဖြစ်သော Alibaba နှင့် Tencent တို့ ကိုင်တွယ် သော ပမာဏ နှင့်အတူ ပိုမို ကြီးမားသော ငွေပေးငွေယူ ပမာဏ ကိုမည်သို့ တုန့်ပြန် မည် ကိုကြည့် ခြင်းဖြစ်သည်။
ယူအက်စ် သည်၎င်း၏ ဒစ်ဂျစ်တယ် ငွေကြေး ကို အသုံးပြု၍ ကမ္ဘာ့ ဘဏ္ system ာရေး စနစ် သို့ ထပ်မံ ပေါင်းစည်း လိုသော ဆန္ဒ နှင့် ပတ်သက်၍ ကျွမ်းကျင် သူများက ဟောင်ကောင်ဒေါ်လာ ၏အဓိက အရံ ငွေကြေး အဖြစ် ချက်ချင်း အစားထိုး ရန် မဖြစ်နိုင် ပုံရသည်။
Turrin ၏အဆိုအရ “ ဒီ ဂျီ တယ် ယွမ် သည်ကမ္ဘာ့ ဘဏ္ markets ာရေး စျေးကွက် များတွင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ကိုအစားထိုး ခြင်း အကြောင်း မဟုတ်ပါ။ ၎င်းသည် အမှန်တကယ် ဖြစ်ပျက် လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ ဆိုလိုသည်မှာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ကို တရုတ်နှင့် ဒေသတွင်း ကုန်သွယ်ရေး အရောင်းအ ၀ ယ် များမှ အစားထိုး နိုင်သည်ဟု ဆိုလိုသည်။”
တစ်ချိန်တည်းမှာပင် ဒီဂျစ်တယ် RMB စီမံကိန်းသည် တရုတ်၏ အကြီးမားဆုံး စီးပွားရေး ပြိုင်ဘက် ဖြစ်သော အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိ မူဝါဒ ချမှတ် သူ အချို့ ၏ ဒေါသ ကို နှိုးဆွ ပေးခဲ့သည်။ မွာဇူလိုင္လုံခြုံရေး အကြောင်းပြ ချက်များအရ ရီပတ် ဘလီ ကန် အထက် လွှတ်တော်အမတ် တစ်စု သည်အမေရိကန် အိုလံပစ် ကော်မတီ အား အားကစားသမား များအား ဒီဂျစ်တယ် ယွမ် အသုံးပြုမှုကို တားမြစ် ရန် တရားဝင် တောင်းဆိုခဲ့သည်။
မည်သို့ပင် ဖြစ်စေ၊ ယခုနှစ် အိုလံပစ် အားကစား အတွက် အီလက်ထရောနစ် RMB ရှေ့ပြေး စီမံကိန်း ကိုစီစဉ် ထားသည့်အတိုင်း ဆက်လက်လုပ်ဆောင် သွားမည်ဖြစ်သည်။ တရုတ် နိုင်ငံပိုင် မီဒီယာ များ အဆိုအရXinhuanetအချို့ နေရာ များသည် သုံးစွဲ သူများအား ၎င်းတို့၏ မတူကွဲပြားသော လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်း ရန် စမတ် နာရီ များ၊ နှင်း လျှော စီး လက်အိတ် များသို့မဟုတ် တံဆိပ် များကဲ့သို့သော ၀ တ်ဆင် နိုင်သော ကိရိယာ များမှတစ်ဆင့် ဒစ်ဂျစ်တယ် ယွမ် ငွေ ကိုရယူ သုံးစွဲ ခွင့် ကိုပင် ခွင့်ပြု လိမ့်မည်။
ဆောင်းရာသီ အိုလံပစ် ပြီးဆုံး သွားသောအခါ ဒစ်ဂျစ်တယ် ယွမ် ငွေကို နိုင်ငံတကာ အသိုင်းအ ၀ ိုင်း မှ ၀ င်ရောက် ရန်ကြိုးပမ်း မှုများသည် တရုတ်နှင့် အိမ်နီးချင်း နိုင်ငံ များအကြား နယ်စပ်ဖြတ်ကျော် ကုန်သွယ်ရေး လမ်းကြောင်း များမှတဆင့် ဖြစ်နိုင်သည်။
Turrin က “ အာရှ သည် CBDC များတည်ဆောက် ရာတွင် ကမ္ဘာ့ ခေါင်းဆောင် တစ် ဦး ဖြစ်ပြီး ဒစ်ဂျစ်တယ် ယွမ် သည် ဒေသဆိုင်ရာ အရံ ဒစ်ဂျစ်တယ် ငွေကြေး အဖြစ်အသုံးပြု ဖွယ် ရှိသည်။”